Atọ kasị dịrị nchebe na kasị mma onwe adịzi scooters enyocha - Jomo Technology Co., Ltd
Atọ kasị dịrị nchebe na kasị mma onwe adịzi scooters enyocha
The hoverboard na-nabatara ihe tọrọ ndị mmadụ, n'ihi na ha nwere ike nweela na-akparaghị ókè obi ụtọ na-enwe na-agba hoverboard, ma otú ịhọrọ a mma onwe guzozie skuuta? Ugbu a ka m nwere ike ikwu na atọ kasị dịrị nchebe na kasị mma onwe adịzi skuuta gị. Onye mbụ bụ KOOWHEEL ika Self Balance Board K7 na Mankeumman 2272 Asambodo na LG smart batrị. The 2 wheel Self adịzi skuuta K7 Bluetooth Abụọ wheeled 8.5inch Good Self adịzi skuuta HoverboardSolid taya Hummer- eweta mma ahụmahụ gị! Ọ na atụmatụ a ubé dị iche iche technology karịa ndị ọzọ hoverboards, ikwe ka ọ na-eji ndị ọzọ dị ike Motors, na 8.5inch wiil mma na unyi na ahịhịa, ọ bụ ezie na, ọ bụghị ịbụ inflatable, ị ka ga-a otutu vibration na mkpumkpu terrains. Mgbe a zuru ụbọchị ma ọ bụ ejegharị, anyị na-enwe ike iji nweta a 15-20km a hoverboard. Ya kasị ike ọsọ bụ na 12km kwa awa. Ọ nwere ike ikekwe njem na ihe ọ bụla elu ma elu inclines n'ihi na ike Motors. Ọ bụ kpokọtara ike seamlessly-ewe gị site na otu ebe gaa ebe ọzọ, kpamkpam unhindered site n'ala bụ ndị ị na-eme njem. The hoverboard emegharị gị iwu nnọọ nanị na ọ dịghị ewe oge ịghọta ya.
Ọzọ ulo oru KOOWHEEL onwe-guzozie hoverboard K5 UL2272 na ASTM asambodo na sọrọ Bluetooth na Ikanam ọkụ. Ọ na-nwere a emefu n'etiti, nnọọ mfe eweta. Na nkà na ụzụ, modular Ọdịdị, ọtụtụ obere Gịnị, ọzọ mma, ọtụtụ ala ntụpọ ọnụego (3 kwa puku) na ndị ọzọ mụ. Nke a onwe-guzozie hoverboard bụ a pụrụ iche ụdị njem nke nwere ike na-aga ebe ọ bụla na obodo ka ogologo oge gị electric batrị na-eme ya na-aga. Na aka-free bike aga site kwa ụbọchị ihe aga-eme dị ka ọrụ, ngalaba ma ọ bụ anyplace ọzọ nwere ike atụgharị nri n'ime a Placid na-eju ndisịn idem.
Koowheel n'oge na-adịbeghị ulo oru mpịachi electric skuuta na patent Innovative fashionable jụụ imewe nke na-enye ohere mmepe nwere ihe ndị kasị mma otutu. Ya Ikanam ngosi ihuenyo kpamkpam egosi batrị na-agba. Light ma energetic.
N'ikwu ya n'ozuzu, ndị Segway hoverboard emenịm ebube chọrọ na nkà na ụzụ ọganihu na ntụrụndụ. Egbu akụkọ a ma ama na Segway ike izute ọtụtụ agagharị mkpa a sara mbara ahịa, nwere ike ikwado na-enyefe ka ụdị dị iche iche nke ụgbọ njem, na-eje ozi dị ka a dochie anya na ugbo ala.
Post oge: Aug-23-2017